Dadku waxay inta badan ka fekeraan su'aalahan marka ay soo iibsanayaan kursi cusub oo gurigaaga ah, keebaa soo jiidasho leh, waxa maaddadu sii dheeraato, fadhiga safafka ee maqaar ama dhar kee fiican?? Dhab ahaantii, waxaa jira arrimo badan oo la tixgelinayo in miisaaniyaddu tahay iyo in kale, raaxada, qaab, iwm wixii intaa ka dambeeya waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan noloshaada. In terms of the leather vs…
Sariirta oo ah door muhiim ah oo ah alaabta guriga waa lagama maarmaan nolol maalmeedkeena. Sariir raaxo leh oo jilicsan ayaa go'aamisa tayada hurdadaada. Haddii sariirta ay adag tahay in la seexdo oo la nasto, waxay ku dareensiin doontaa daal maalinta ku xigta taas oo si weyn u saamaysa xaaladda shaqo ee qofka. There are a wide variety of types for the bed…
Hordhac Kursiga ciidda ee korontadu wuxuu leeyahay badhanno kala duwan. Badhamada kor iyo hoos ee badhanka waxay xakamayn karaan kor iyo hoos xagga dambe ee fadhiga. Iyadoo lagu hagaajinayo fadhiga korantada, jagada qofka ee barkinta ayaa sidoo kale isbadali doonta, sida dib udhaca. Mararka qaarkood, dadku miskahooda gadaal ayey u dhaqaajin doonaan, and vice…
Waxaa jira shan xeer oo loogu talagalay dayactirka joodariga. Waxaan rajaynayaa inay kaa caawiso inaad kharash yar ku baxdo si aad u gasho habeen wanaagsan halkii aad dhibsan lahayd boodh, jeermis, iwm XUKUN 1: Hawada furaashkaaga maalin walba Habeen kasta, midkeenba waxaan luminnaa ku dhawaad ​​nus litir oo biyo ah annagoo hurda, which creates an appealing environment for dust mites and can lead…